HomeWararka CiyaarahaWakiilka Alvaro Morata oo meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo Barcelona.
January 25, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Wakiilka weeraryahanka Juventus Alvaro Morata ayaa meesha ka saaray rajada uu kooxdisa uga tagi karo Barcelona .
Iyadoo Old Lady loo maleynayo inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic , mustaqbalka dhow ee Morata ee Turin ayaa la fahmi karo su’aal la geliyay.
29-sano jirkaan – oo hadda amaah kula jooga Juve kana yimid Atletico Madrid – ayaa la saadaaliyay inuu amaah ugu wajahan yahay Barca inta ka harsan xilli ciyaareedka 2021-22, laakiin wakiilka Isbaanishka Marco Branca ayaa hadda toogtay xiriirkaas.
Isagoo la hadlayay Gazzetta dello Sport , Branca ayaa yiri: “Wadada Barcelona ma ahan mid sii waarta, Alvaro wuxuu dareemayaa wanaag Turin, waana arki doonaa waxa ku dhici doona Atletico Madrid xagaaga.
“Waxaan ku rajo weynahay mustaqbalkiisa Madowga iyo Cadaanka, sida Benzema, wax badan ayuu u shaqeeyaa kooxda.”
Barcelona ayaa weli la rumeysan yahay inay rajo ka qabto inay xagaaga la soo wareegto Morata, kaasoo sideed gool dhaliyay shanna caawiye ka ahaa 29 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan ilaa haatan xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahankii hore ee Chelsea qandaraaska uu kula jiro kooxda Atletico ayaa ku eg xagaaga 2023. waxa uu dhaliyay 22 gool 61 kulan oo uu saftay